Faahfaahin:Kulankii Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelle iyo Qodobadii Lagu Heshiiyay – Goobjoog News
Kulan maanta Sabti ah August 8, 2015-ka ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana looga hadlayay sidii maamul loogu sameeynayay Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga soo saaray dhowr qodob.
kulanka waxaa ka soo qeyb galay Xasan Sheekh Max’uud iyo qaar ka tirsan golihiisa Wasiirada uu ugu horeeyo Wasiirada arimaha gudaha iyo Federaalka, waxaa kaloo ka soo qeyb galay Wakiillada IGAD iyo AMISOM.
Shirka oo ka dhacay Villa-Hargeysa ayaa waxaa laga soo saaray 12 qodob oo lagu heshiiyay waxaana ka mid ah:
in la dhiso maamul ay yeeshaan Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe
in dhismaha maamulka ay ka qeyb galaan dhamaan beelaha Soomaaliyeed ee wada dega Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
in la qabto Shirweyne ay u dhan yihiin dhamaan Beelaha Labadan Gobolda Shabeelee iyo Hiiraan si loo dhiso Dowlad goboleed ka kooban Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
in la dhiso Guddi farsamo oo ka kooban 31 oo ka socda dhamaan beelahas, Guddigaas Farsamo waxaa lagu soo magacaabi doonaa 14 Cisho Gudahood marka la saxiixo Heshiiskan.
Maamulka la dhisayo isagoo matalaya dhamaan beelaha dega labadaas gobol waxaa uu u howl galayaa si wada jir ah ,in loola dagaallamo Nabad diidka Gobolladaas, Laguna soo dalaabo Nabadna iyo xasilooni labada gobol.
Geeddi socodka dhismaha maamulka waxaa lagu dhameeystirayaan 60Maalmood, waxaana fududeeynaya Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa masuul ka ah Xaqiijinta, meel marinta, taabbo gelinta heshiiskan, iyo bixinta wixii tasiilaad ah.
Shaqada iyo waajibaadka guddiga Farsamada waxaa soo diyaarinaya Xukuumadda Federaalka ah, kuna soo celinayaa saxiixayaasha.
Ciddii alla ciddii carqaladeysa hannaanka ggedi u socodka habdhismaha maamulka waxaa looa qoonsanayaa qaswade waxaana laga qaadayaa tallaabada ku haboon.
Heshiiskan waxaa wada jir u saxiixaya Guddoomiyayaasha Labada Gobol iyo 12 Wasiir oo ka soo jeeda labadaas gobol.
saxiixayaasha heshiiskan xiriir lama laha habka awood qeybsigu noqon doono.
saxiixayaasha waxaa ay saxiixooda ku caddeynayaan waafaqsanaan tooda maamul goboleed ay yeeshaan dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
Xildhibaan Hore Xuseen Gaagaale “Ciidamada Dowladda Ayaa Si Xun Ii Jir Dilay”
Xukuumadda Federaalka Oo Sheegtay Inay Baarayso Waxa Ka Jira In La Askareeyay Carruur Kasoo Baxday Al-shabaab
Cqhcsg axlfui cialis cost where to buy cialis online
Zgzfcx racjmv lowest price for viagra
viagra soft pills sale sildenafil drug interactions
take cialis viagra for sale
brand viagra over the counter viagra
online pharmacy canada cialis coupon cvs
canadian pharmacy reviews consumer reports best price for cialis
Wpoidt smxnzw canadian pharmacy near me Ioxom
Taipmm rxryen cialis generic in us Qakto
Zytwjf vrgbtf cialis buy Mfjrm
Tjpreb zhqyhg can you buy cialis over the counter in australia Rngnc
Mzikjt vxaslw generic cialis best price Wzvcv
ed pills that work quickly discount pharmacy ed pills online
mexican pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ 24 hour drug store near me
drug store 24 hr pharmacy online drugstore
rx express pharmacy uk pharmacy canada drug pharmacy
I for all time emailed this web site post page to all my ass...
[url=https://cial20mg.online/]buy tadalafil in india[/url]...
dwhp cheap viagra http://dietkannur.org aqap mrcy...
cialis prise journaliere [url=https://cialiswh.com/]cialis w...
lasix 1 mg/kg [url=https://lasixmg500.com/]furosemide lasix...